ब्लगिंग विकल्प पुरस्कार | Martech Zone
बिहीबार, अप्रिल 12, 2007 मङ्गलबार, अक्टोबर 4, 2011 Douglas Karr
यदि तपाईले मेरो ब्ल्ग लाई मजा लिनुभयो भने ब्लगर्स च्वाइस अवार्डमा मलाई मत दिनुहोला!
त्यहाँ कोटीहरूको गुच्छा छन् ... एउटा हराइरहेको छ, जे होस्, उत्तम अल्पसंख्यक ब्लग हो। मैले लेखे र उनीहरूले मलाई भने कि यसको लागि धेरै ढिला भइसक्यो तर उनीहरूले आउँदो वर्षहरूमा यसलाई प्राप्त गर्ने प्रयास गर्ने छन्।
एउटा चीज मैले पत्ता लगाउन नसक्ने भनेको केवल एउटा वर्गमा कसैलाई मतदान गर्नु हो जब उनीहरू पहिले नै बहु कोटीहरूको लागि मनोनयन गर्छन्। यस्तो देखिन्छ कि तिनीहरू प्रविष्ट गरिएको प्रत्येक कोटीमा एकल मत थप्न चाहानुहुन्छ।
जाति, धर्म, राजनीति, सेक्स र कट्टर सम्बन्धी मेरा तीन नियमहरू
अप्रिल 14, 2007 मा 5: 16 PM
डग मैले तपाईंको ब्लगको लागि मतदान गरे र सही शिकागो शैलीमा दुई पटक मतदान गर्ने प्रयास गरें! बधाई छ
अप्रिल 14, 2007 मा 5: 18 PM
धन्यवाद, JD! एकदमै हासोलाग्दो!
अप्रिल 14, 2007 मा 5: 49 PM
म तिमीलाई एउटा मत दिन्छु। मैले तपाईंको अघिल्लो पोष्टको आधारमा केहि उपयोगी प्लगइनहरू फेला पारे। एक राम्रो छ!
अप्रिल 14, 2007 मा 6: 10 PM
म यसको कदर गर्छु, थोर!